Updates software – Windows – Page 21 – Vessoft
Updates software – Windows – Page 21
Free MP3 futhi WMA Converter 2.2
Converters zomsindo Ithuluzi ukuguqula amafayela alalelwayo ibe ngetakhiwo letehlukene. Isofthiwe ikuvumela ukusetha nemingcele for ekuguquleni amafayela alalelwayo iqukethe umhleli tag.
English, Українська, Français, Español... Comodo 8.2.0.4792 AntiVirus, Internet futhi Firewall
Antiviruses I antivirus software iphakethe ukuvikela ikhompyutha yakho. Isofthiwe inikeza ukuhlala ephephile in enethiwekhi uqaphe traffic for izinsongo kunokwenzeka.
English, Français, Español, Deutsch... WTFast 3.5.9.511 futhi 4.0.5.616 beta
System nokwenza Imidlalo Ithuluzi ukwandisa ijubane yokudlulisela idatha phakathi kwekhompyutha yakho kanye kwiseva yomdlalo. Uhlelo ikuvumela ukuba ngcono ijubane uxhumano in imidlalo ehlukahlukene athandwayo.
Testing Ithuluzi ukuthola ulwazi mayelana uhlelo lokusebenza. Isofthiwe ubonisa izici hardware efakwe.
Graphics and design Ithuluzi for yokumodela wezangaphakathi in the 3D. Isofthiwe ubonisa design eningiliziwe izingxenye ezahlukene kwesakhiwo kanye nezinye izikhungo.
Akwazi ukugcina Isofthiwe kudala bootable DVD noma USB oshayelayo. Isofthiwe kabanzi esetshenziswa abanikazi computer ngaphandle drive optical.
English, Français, Español, Deutsch... Carambis Software Updater 2.3.0.5412 Pro futhi 2.0.0.1322 Standard
Abashayeli Isofthiwe ukuthola futhi ukufaka abashayeli yisikhathi noma ulahlekile. Isofthiwe iqukethe abashayeli enkulu futhi zanamuhla base kusukela abakhiqizi imishini.
English, Français, Español, Deutsch... Avira AntiVir 15.0.15.129 Free, Pro futhi Internet
Screen bamba Amathuluzi anamandla wasithatha ividiyo kusuka screen. Isofthiwe ikuvumela ukuba alobe ividiyo noma audio, ukwenza sikrini, uhlele bese wengeza ezihlukahlukene imiphumela.
Hambayo Isofthiwe ukuvumelanisa idatha phakathi idivayisi HTC kanye computer. It isekela update ngokuzenzekelayo abashayeli idivayisi.
English, Français, Español, Deutsch... Sandboxie 4.2 futhi 5.07 beta
E-mail Isofthiwe zokuphathwa imeyili. Amathuba Wide ayatholakala umsebenzisi ukuklama izinhlamvu futhi ulungiselele software izidingo zakho siqu.
English, Français, Deutsch, Italiano... Bona software xaxa